Galmudug oo hakisay diyaaradaha uga imaanayey Muqdisho • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Galmudug / Galmudug oo hakisay diyaaradaha uga imaanayey Muqdisho
Galmudug oo hakisay diyaaradaha uga imaanayey Muqdisho
Wareegto ka soo baxdey xafiiska Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geele (Xaaf) ayaa lagu sheegay in laga bilaabo maanta oo Khamiis ah la joojiyey dhamaan duulimaadyadii ka imaanayey magaalada Muqdisho ee ku wajahnaa Galmudug.
Qoraalka ka soo baxay Xaaf ayaa mar kale eedeyn dusha looga tuurey Dowladda Federaalka ah in ay ka danbeyso xiisadda siyaasadeed ee ka taagan Galmudug.
Sababta loo joojiyey duulimaadyada ayaa qoraalka lagu sheegay in ay tahay XIldhibaano iyo Wasiiro ay Dowladda federaalku maanta u direyso Galmudug, kuwaas oo ay ku eedeeyeen in ay ka danbeeyaan qalalaasaha ka taagan Galmudug ee sababay in qaar kamid ah Xildhibaanadu ay xilkii ka xayuubiyeen Madaxweyne Xaaf.
Wefdiga maanta ku wajahnaa Cadaado waxaa kamid ah Wasiiru dowlaha Howlaha Guud Axmed Qoor Qoor, Xildhibaan Cabdi Axmed Dhuxulow Dhegdheer, Xildhibaan Yuusuf Geelle Dhagey iyo xildhibaano kale.
Maalintii shalay ee Arbacada waxaa Cadaado gaarey Xildhibaano isugu jira labada Aqal oo gaaraya 9 kuwaas oo uu hoggaaminaayo guddoomiye kuxigeenka kowaad ee Aqalka Sare Abshir Axmed Bukhaari, waxaana ay kulama gaar gaar ah la yeesheen dhinacyada ay u dhaxayso xiisadda siyaasadeed ee Galmudug.
Lama oga sida go’aankan noqon doono iyo saameynta uu ku yeelan doono dadka rayidka ah ee safarada ku tegi lahaa Galmudug.
Hoos ka akhri wareegtada Xaaf ku mamnuucay duulaamdka Muqdisho-Galmudug